Isi Isi Nnukwu ara 160CM Lovehụnanya Mmekọahụ Dolls Morton
Nnukwu ara mmekọahụ mmekọahụ,G cup ụmụ bebi mmekọahụ,Ebughibu na umu nwanyi
Morton - 160CM Busty Girl karịrị echiche efu mkpa Isi TPE Mmekọahụ Doll
Brand: AXB nwa bebi
Save 13%$ 1,640.21$ 1,864.00
Ọgụgụ isi Heating: *
Mkpa (+ $ 60)
Enwere ike ịme ụmụ bebi AXB na ụbọchị 3-6. Ndị na-emepụta ahụmahụ nwere ike inye nkwakọ ngwaahịa mara mma na obere oge. Dolmụ bebi na-ahụ n'anya na-eji akụkụ mgbakọ kachasị mma. Ndị na-ahụ maka ịdị mma na-eduzi nyocha na nyocha ọ bụla na usoro mgbakọ na ebe nchekwa tupu ebufee ya iji hụ na ogo 100%. Ngwaahịa niile enwetala asambodo CE, ndị otu niile ga-anwa ike ha niile inye ndị ahịa niile ọrụ dị elu.
Elu ： 160cm
Ibu ibu ： 48kg
Bust ： 140cm
N'úkwù ： 60cm
N'úkwù ： 90cm
Ogwe aka: 62cm
Ogologo Ogologo: 78cm
Ububo obosara: 34cm
Mmetụta omimi: 17cm
Anal omimi: 14cm
Ọnụ omimi: 10cm